1. कसरी फ्रान्सेली टोस्टलाई सुगन्धित, स्वादिष्ट, उत्तम संयोजन बनाउने। यति राम्रो छ कि तपाईं खान रोक्न सक्नुहुन्न
2. फ्रान्सेली टोस्ट, वा सजिलैसँग अण्डा-डुबाएको रोटीको रूपमा चिनिन्छ, विलासी पश्चिमी शैलीमा। जुन तपाईं स्वादिष्ट मिठाईमा बनाउन सक्नुहुन्छ जुन भोजमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ पार्टी वा खाजाको रूपमा यसलाई बिहानको खाजा, दूध, चिया वा कफिको साथ खाजाको रूपमा समावेश गर्दै, र दिउँसो स्वागतका लागि मिठाईको रूपमा पनि बनाउन सकिन्छ। कुनले तपाईंलाई बताउन सक्छ कि फ्रान्सेली टोस्ट बनाउन सजिलो छ, र यदि ताजा फलले सजाइएको छ भने, यो थपिन्छ पौष्टिक मूल्य पूर्ण रूपमा साथै, जब खाईन्छ, यसले अझै स्फूर्ति र ताजा महसुस गर्दछ। फ्रान्सेली टोस्ट बनाउन पनि धेरै सजिलो छ। पनी खाना पनी राम्रो छैन भने पनि प्लस सामग्री तयार गर्न गाह्रो छैन बजार मा किन्न सकिन्छ विभागीय भण्डार वा सुविधा स्टोरहरू पनि यदि तयार छ भने, स्वादिष्ट फ्रान्सेली टोस्ट बेरीको लागि कच्चा माल तयार गरौं। निम्न अनुसार कच्चा माल तयारी प्रक्रिया
3. मोटा रोटी को दुई टुक्रा
4. २ अण्डाहरू
5. १ कप ताजा दूध
6. अधिक मीठो स्वादको लागि एक चुटकी नुन।
7. बेरी फल जस्तै ब्लूबेरी, स्ट्रबेरी, वा कुनै पनि प्रकारको फलहरू।
8. १ केरा
9. मह, तपाईंको स्वाद अनुसार
10. एउटा सानो अनसाल्डेड बटर
11. सामग्री तयार गर्नुहोस् त्यसपछि एउटा कचौरामा ताजा दुध र अण्डाहरू खन्याउनुहोस्। थोरै नुन थप्नुहोस् र संयोजन गर्न बीट गर्नुहोस्, वा तपाईं मिक्सर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
12. रोटीलाई दुबै छेउमा कुटेको अण्डा र दुधमा डुबाउनुहोस्, जस पछि कम तातोमा प्यान गरम गर्नुहोस् र थोरै माखन, वा लगभग १० ग्राम थप्नुहोस्। रोटीलाई सुनौलो र सुगन्धित बनाउन दुवैतिर यसलाई बदल्नुहोस्, जब रोटी तयार हुन्छ, तब यसलाई अलग राख्नुहोस् र अर्को बनाउनुहोस्।
13. प्यानमा त्यसपछि थोरै माखन जोड्नुहोस्। त्यसपछि केरालाई चश्मामा काट्नुहोस् र माखनको साथ साटाईड गर्नुहोस् जसले यस तरिकाले केरालाई अझ रमाइलो बनाउँदछ
14. त्यसपछि, रोटीको दुवै स्लाइसहरू प्लेटमा राख्नुहोस्। जामुन संग सजाइएको सुन्दर हुनको लागि, त्यसपछि प्लेटको वरिपरि केरा राख्नुहोस् र महलाई चाहानुहुन्छ खन्याउनुहोस्। त्यो हो, फ्रेन्च टोस्ट पूरा भयो।
15. तिमीलाई कस्तो छ फ्रान्सेली टोस्ट कसरी बनाउने जुन सजीलै बनाउन सकिन्छ, म भन्न सक्दछु कि यो धेरै स्वादिष्ट छ। र पाहुनाहरुलाई स्वागत गर्न एक मेनू पनि कच्चा मालका साथ शानदार जुन भेट्न सजिलो छ यस छुट्टीको लागि, परिवार वा साथीहरू सँगै खानको लागि एक फ्रान्सेली टोस्ट बनाउँनुहोस्, तपाईं स्वादिलोपनको आदी हुनेछन्। र एक धेरै रचनात्मक मेनू सबैको लागि उपयुक्त छ